ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : မိုးစက်ဝိုင်ရဲ့ ညအိပ်ခါနီး အလှ
မိုးစက်ဝိုင်ရဲ့ ညအိပ်ခါနီး အလှ
မိုးစက်ဝိုင်ရဲ့ ည အိပ်ရာဝင် အလှနဲ့ ဓာတ်ပုံတချို့ပါ။ ထူးခြားမှုတခုအနေနဲ့ မိုးစက်ဝိုင်ကို သူ့ ပရိသတ် လို့ ပြောတဲ့ ရုရှားရောက် အမောင်တယောက်က အနီးကပ် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေပုံကို ရိုက်ထားတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မိုးစက်ဝိုင်ရဲ့ ညအိပ်ရာဝင် အလှ ပုံအောက်မှာ မိုးစက်က အခုလို ရေးထားလေရဲ့......
Good Night & haveanice dream you guys ...
Please do not forget to Vote ...
သူ့ကို ဗုတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့တဲ့။ မပူပါနဲ့ မိုးစက်ရယ်။ ဖိုးလပြည့်က ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး လူပေါင်းများစွာ၊ အိုင်တီ ပညာရှင်ပေါင်းများစွာကို ငွေပေးပြီး မိုးစက်ကို Miss Universe 2013 သရဖူဆောင်းရဖို့နဲ့ ဆု တခုခု မဖြစ် မနေရဖို့အတွက် အသည်းအသန် ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဖိုးလပြည့်ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေက MM Play Boys ကို ပြောကြပါတယ်။
ဒီအောက်ဆုံးပုံက မိုးစက်ဝိုင်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေသူကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်လိုက်တဲ့သူကတော့ ဂျက်ကြီးဆို လား ဘာဆိုလား သူ့ကိုသူ ကင်ပွန်း တပ်ထားတယ်။ ဂျက်ကြီး ဘယ်သူဆိုတာ သိလား? ရုရှားရောက် အမောင် တဦးပေါ့ကွယ်.... ။